I-Tecnoricambi Snc di Testa Cristina - Torre San Giorgio
I-Tecnoricambi yeTesta Cristina - Torre San Giorgio Cuneo
Izingxenye Zokulondolozwa Kwemishini Yezolimo Nezimboni
I-Tecnoricambi Snc di Testa Cristina e Via Circonvallazione Giovanni Giolitti 96 a ISan Giorgio tower esifundazweni Cuneo yinkampani esebenza ngokuthengisa kwe Izingxenye Zemishini Yezolimo nezesekeli e Izingxenye zezikhala nezesekeli zemishini yezimboni.
UTecnoricambi Snc di Testa Cristina eTorre San Giorgio, esifundazweni saseCuneo
I-Tecnoricambi Snc di Avivinye uCristina, a ISan Giorgio tower, esifundazweni Cuneo, yinkampani egcoba iqembu labachwepheshe emkhakheni we Izingxenye Zemishini Yezolimo nezesekeli e Izingxenye zezikhala nezesekeli zemishini yezimboni. Khetha ubuholi obungenakuphikiswa benkampani efana I-Tecnoricambi Snc di Testa Cristina, a ISan Giorgio tower, esifundazweni Cuneo, futhi ethengisa imikhiqizo yayo esifundazweni eTurin.
Izesekeli Zemishini Yezolimo Nezimboni eCuneo: izingxenye ezisele ukukuvumela ukuthi usebenze ezimeni ezifanele
Wazalwa kusuka eminyakeni eminingi yesipiliyoni emkhakheni Izingxenye Zemishini Yezolimo nezesekeli e Izingxenye zezikhala nezesekeli zemishini yezimboni, Inkampani I-Tecnoricambi Snc di Testa Cristina inikeza Ukukhetha okubanzi kwemikhiqizo evela kwimikhiqizo emihle kakhulu emakethe esifundazweni Cuneo e eTurin. Izolimo Nemishini Yezimboni Yezolimo nezesekeli zazo zonke izidingo ezivela kwaTecnoricambi Snc di Testa Cristina eTorre San Giorgio, esifundazweni saseCuneo.
Izingxenye zezikhala zemishini yokunakekela inhlabathi: ubuciko bokulima buqala ngokusetshenziswa kwamathuluzi afanele
Inkampani I-Tecnoricambi di UCristina Testa uphawu lomhlaba esifundazweni Wedge, emkhakheni we imishini yezolimo ed yezimboni. Ukulima, ukulima noma ukumba umhlaba wokutshala yimisebenzi edinga imishini eqinile nokusebenza. Ekomkhulu lethu ku ISan Giorgio tower uzothola i izingxenye ezisele ilungele eyakho izimoto zezolimo, kulandelwe futhi kukhanya. Ngaphezu kwalokho, singumnikazi omkhulu we izesekeli namathuluzi okusebenza umhlaba ngendlela efanele.
Izingxenye zezikhala zemishini yezimboni nemishini: imikhiqizo ehambisanayo ngaphansi kophawu lokuqamba
A ISan Giorgio tower, I-Tecnoricambi di UCristina Testa kungenye yezitolo ezaziwa kakhulu ngabasebenza kulo mkhakha Industrial. Le izimoto isetshenziswa ngu fabricheikakhulukazi, kumele baqinisekise amazinga aphezulu wokukhiqiza. Inkampani yethu inikeza isampula enkulu ye izesekeli e izingxenye ezisele ilusizo ekubuyiselweni kwasendulo ezindala izakhi konakele, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza nokusebenza kahle. Izinto zethu zivela kuphela ezindlini zokukhiqiza eziqinisekisiwe futhi njalo ziqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
Ikheli: Nge-Circonvallazione Giovanni Giolitti, 96
Idolobha: ISan Giorgio tower
I-POSTAL CODE: 12030
Ucingo: 0172 96157
Inombolo ye-VAT: 02613110044